politika Fiarovana fiainan'olona - Infinite-electronic
Homepolitika Fiarovana fiainan'olona
Miaro ny mombamomba anao manokana ny Infinite-Electronic.hk, ary tsy mamoaka, manofa na mivarotra azy ho an'ny antoko fahatelo.
Afaka mitsidika ny tranonkalanay ianao nefa tsy milaza amintsika hoe iza ianao na manome antsika fampahalalana manokana momba ny tenanao. Raha vao te hiangavy anao ianao, dia mila mameno ny fangatahantsika hahazo fanazavana sasany. Raha misafidy ny hanome anao ny mombamomba azy manokana ianao, ny vohikala dia manangona ny vaovao izay omen'ny mpitsidika an-tsitrapo. Hanangona sy hitahiry ny mombamomba ny tena manokana izahay:
Adiresy mailaka, fifandraisana vaovao, mba hamaliana ireo fanontaniana
Fampahalalana ara-bola, laharana banky, handraisana ny baiko nividianana
Fandefasana, faktiora na fampahalalana hafa entina mandefa zavatra voaaro
Fampahalalana hafa, ao anatin'izany ny fampahalalana momba ny tranonkala serivisy sy ny adiresy IP
Tongasoa eto Infinite-Electronic.hk. Amin'ny Infinite-Electronic.hk, ny fijerinao manokana sy ny fiarovana ny mombamomba anao manokana dia raisina amim-panajana. Ity fanambarana manaraka ity dia hampahafantatra anao ny fomba fampiasantsika sy ny fitantanana ny angona nangatahinay. Isaky ny mitsidika Infinite-Electronic.hk ianao, ny servery dia manaiky ary manokatra ny adiresy IP anao. Ny adiresy IP dia ny adiresin'ny solosaina manao fangatahana amin'ny tranonkala web. Tsy misy fampahalalana manokana na antsipirihany azo raisina ao anatin'ity fifanakalozan-kevitra ity-ny tranokala mpitsidika dia tsy natao hamolavola an'ity vaovao ity.
Ao amin'ny Infinite-Electronic.hk, ny adiresy IP an'ny mpitsidika dia averimberina jerena sy dinihina amin'ny tanjon'ny fanaraha-maso, ary ny fanatsarana ny tranonkalanay amin'ny fomba tsotra, ary tsy hizara ivelan'ny Infinite-Electronic.hk. Mandritra ny fitsidihana amin'ny tranokala, dia mety hangataka anao ny fampahalalana momba ny fifandraisana (adiresy mailaka, nomeraon-telefaona, lahatahiry ary adiresy amin'ny fandefasana / faktiora). Ity vaovao ity dia nangonina tamin'ny volavolan-kevitra an-tsitrapo-ary amin'ny fankatoavanao ihany.
Ny Infinite-Electronic.hk dia ahitana votoaty, serivisy, dokam-barotra ary fitaovana hafa izay mampifandray amin'ny tranonkala natsangan'ny antoko fahatelo. Tsy manana fanaraha-maso ny fampahalalana manokana napetrak'ireo tranonkala ireo izahay, ary tsy tompon'andraikitra amin'ny fahamarinan'ny tranonkala.
Ity dokam-barotra ity dia miresaka fotsiny amin'ny fampiasana sy ny fampielezana ny vaovao izay nangonina antsika, ny fitsipika samihafa dia azo ampiharina ho an'ny antoko fahatelo. Infinite-Electronic.hk dia tsy mifehy ny tranonkala hafa, ary ity Politika tsy miankina ity dia tsy mihatra amin'izy ireo. Mamporisika anao izahay hiantehitra amin'ny politika momba ny fiainana manokana ireo tranainy ireo raha azo atao.
Cookies dia rakitra an-tsoratra tsotra napetraka eo amin'ny fiara sarotra, ary azo antoka toy ny tahirin-tserasera hafa voarakitra ao anaty ordinatera. Cookies dia natsangan'ny tranonkala ary ampiasaina hitahiry ny angona ho an'ny mpitsidika. Ny cookie dia tsy azo ampiasaina amin'ny tranokala hafa ankoatra ilay namorona azy, na mamaky ny angona avy amin'ny solosainao hafa noho ny angona voatahiry ao aminy. Ireo angona nofinidintsika hitehirizana ao amin'ny kitay dia mety tsy ahitana fampahalalana ara-bola, fampahalalana amin'ny fifandraisana, na ireo angona manokana sy mahatsikaiky. Ny tranonkalanay dia mampiasa cookies fotsiny mba hahatsiaro ireo tanjon'ny mpitsidika mba hamoahana votoatin-javatra ilainy manokana.
Miaro ny zo hanova ny politikantsika manokana isika amin'ny fotoana rehetra tsy misy fampahafantarana mialoha.